'Ubulale inkosikazi inqaba kudayiswe umuzi' - Ilanga News
Home Izindaba ‘Ubulale inkosikazi inqaba kudayiswe umuzi’
Kuthiwa uyidubulile maqede wazishisa nayo endlini bashona
UMnu Richard Mabaso (60), usolwa ngokudubula abulale umkakhe, uNkk Fikisile Mabaso (55) emuva kwalokho wazithungela ngomlilo, bashona bobabili.
KUSOLWA ukushaywa wumhlaba kowesilisa wakwa-Z, eMlazi, okubikwa ukuthi udubule wabulala umkakhe ngoMgqibelo, yena wazingqongqisa endlini ngoba efuna ukuba kudayiswe umuzi wabo ukuze athole imali yokuziphilisa nesinqandamathe sakhe, abesehlala naso eNdwedwe, kwazise aphuma nayo emsebenzini ibisiphelile.
UMnu Richard Mabaso (60), usolwa ngokudubula abulale uNkk Fikisile Mabaso (55) emuva kwalokho wazithungela ngomlilo, bashona bobabili.
Indodana yabafi, uMnu Sthembiso Mabaso (35), itshele ILANGA ukuthi uyise wayesebenza eposini, waphunyelwa yimali yakhe wahamba wayohlala eNdwedwe, wabashiya nonina engabanikanga ngisho isenti.
Uthi uyise ufike ngoMgqibelo emini engumuntu ozoxoxa nonina ukuthi usefuna ukubuyela eMlazi.
“Umama ubesebenza e-University of Zululand, ubesewulungisile umuzi wasekhaya ezimele kahle,” kusho uMnu Mabaso. Uthi uyise ufike ngoMgqibelo unina esaphume ngemoto eyothenga ukudla kwasendlini.
“Kuthe uma kufika umama ntambama, bahamba baya ekamelweni labo beyoxoxa. Bengingekho ekhaya ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko, inkosikazi yami ingitshele ukuthi kube yisikhashana bevalelene ekamelweni, yezwa umsindo uqhuma phezulu bexabana, bekhuluma indaba yokuba kudayiswe umuzi.
“Ubaba ubefuna ukuthi kudayiswe umuzi ngoba sekuphele imali yakhe yempesheni.
“Ngithole ukuthi ngemuva kwengxabano yabo, uphume ekamelweni waya emotweni yakhe, wathatha isikhwama efake isigubhu sikaphethiloli kusona.
“Udlule eduze komkami wamkhohlisa wathi isikhwama sinezimpahla zakhe zokushintsha, kanti emini ngesikhathi efika ubemtshele ukuthi akaziphethe izimpahla zokushintsha.
“Lokho kumsolisile umkami wazama ukumlandela efuna ukubona ukuthi uphetheni, kodwa wafika esekhiyile ekamelweni lakhe.
“Kube yisikhashana nje, wezwa umama esekhala ethi usufuna ukungidubula ungibulale kwabe sekuzwakala umsindo wesibhamu,” kusho uMnu Mabaso.
Uthi bangene ekamelweni abebezivalele kulona, bafica izidumbu seziwumlotha.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa avule icala lokubulala nedokodo lophenyo.
Previous articleSibhekwe ngabomvu isinqumo sePSL
Next articleBalahlwe ngelakubo kucwila izizumbulu zabo “ebhanoyini”